Cusbooneysiinta rakibayaasha Cydia oo leh warar muhiim ah | Wararka IPhone
Waxay umuuqataa in Saurik uusan rabin inuu nasto dhamaadka usbuucan waxaana shalay cusbooneysiin laba jibaarmay maanta kusoo biiray a nooca cusub ee rakibayaasha Cydia oo leh warar muhiim ah. Nooca 1.1.19 horeyba wuxuu u keenay horumarka muhiimka ah, taas oo ah inaysan hadda u socon sida Root, laakiin halkii ay noqon lahayd Mobile iyo, mar dambe, noocyo badan ayaa lagu sii daayay waxyaabo cusub oo xiiso leh, sida keydinta nuqul nuqul ah oo iTunes ah, taas oo u oggolaan doonta ka dib dib u soo celinta iyo sameynta JAILBREAK mar kale, qalabkeenu wuxuu ku laabanayaa isla xaaladdii ay ku jirtay kahor soo celinta.
Cusbooneysiinta maanta waa nooca 1.1.23 waxayna la timid sheeko cusub oo noo ogolaatay inaan rakibno nooc duug ah oo xirmada ah. Tani waa muhiim tan iyo markii aan rakibi karno xirmo dhibaato na siineysa, illaa iyo hadda, waxaan sugi karnaa oo keliya horumariye inuu sii daayo cusbooneysiin. Hadda waxaan dib ugu noqon karnaa qaybtii hore nafteena, wax ay isticmaaleyaal badani codsadeen (oo waliba waxaan jeclaan lahayn inaan ku aragno App Store).
Noocani sidoo kale waxaa ku jira sheeko kale oo muhiim ah, oo ah inuu awood u leeyahay inuu arko tweaks la jaan qaada barnaamijyada aan rakibnay. Cusboonaysiintaani waxay naga badbaadin doontaa waqti badan oo aan ku bixin jirnay raadinta macluumaadka khadka tooska ah.
Liiska buuxa ee isbeddelada waa sida soo socota:
Hadda waa suurtagal in la soo dejiyo baakado duug ah: waa wax caadi ii ah inaan tuuro xirmo ka dibna aan ogaado saacadaha ugu horreeya inay tallaabo gadaal u noqotay. Xitaa haddii aan soo rogo nooc cusub, adeegsadayaasha wax casriyeeyay ma haystaan ​​hab fudud oo hoos loogu dhigo. Hadda kaliya ma aha in Cydia loo nisbeyn karo nooca "hadda", laakiin sidoo kale waa suurtagal in dib loogu noqdo nooc kasta oo laga heli karo keydka. Laga bilaabo hadda, waxaan kaga tagi doonaa noocyadii hore serverka in mudo ah hadii ay dhacdo in isticmaaleyaashu ay dhibaatooyin qabaan.
Soo hel fidinta abka: Muuqaalkan waxaa si toos ah u waxyooday UnlimApps, oo sii daayay kordhin loogu talagalay 'Cydia Substrate' oo loo yaqaan 'TweakHub'. Fikradda: waxay si otomaatig ah u go'aamisaa barnaamijyada wax laga beddeli karo loona isticmaali karo liistada ku saleysan barnaamijyada macruufka ee aad rakibtay. Farsamadan waa mid xiiso leh umana baahna in meelaha wax lagu keydiyo ama horumariyayaashu ay si toos ah ugu muujiyaan xirmooyinka, waana wax aan waligood shaqeynin.
Noocaan cusub wuxuu u muuqan doonaa sidii cusbooneysiin qaybta "isbeddelada" ee gudaha Cydia ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » Cydia Installer waxay hadda kuu oggolaaneysaa inaad soo dejiso xirmooyin duug ah
Waan ka xumahay, si aad ah iima cadda
Ma inaad dib u cusbooneysiisaa Jalibreak mise si toos ah ayaa loo cusbooneysiiyaa?
Jawaab Jose Carlos Ram San
Waad salaaman tihiin, Jose Carlos. Xirmooyinkaani waxay u muuqdaan sidii cusbooneysiin ka timid Cydia.
Tusaale ahaan, tweet ka cydia karti uma lihi hadda ma rakibi karo, waxay ku weydiineysaa nooca cydia 1.1.18. Ma awoodi doonaa inaan rakibo oo sidee baan u samayn karaa?
Sideen u JAILBREAK? Fadlan waxaan rabaa inaan rakibo xmodegames .. wayna i weydiisaa cydia tanina waxay ku weydiisataa JAILBILAAD .. Laakiin sidee ayaan ku gaaraa tooodoo !!! Fadlan caawi!
WAAN U BAAHANYAHAY CAAWIMAAD, waxaan watay shaashad buluug ah oo ku jirta 6-gigabyte iPhone 16 oo leh iOS 8.4 oo leh taig jailbreak, nuqulkeedu waa 2.3.0 !! Qof kasta oo kale ayaa dhacay ?? Talooyin ??,.
Waan damiyaa iPhone-ka kadib nus saac kadib waan shidaa, wuxuu daaraa tufaaxa waxaanan helayaa shaashad buluug ah wuuna dib u bilaabayaa, waxaan aqriyay inay ku dhacdo oo kaliya iphone 6/6 + of 128 gigabytes ... laakiin iyaga ayaa lagu hagaajiyay qalabka, laakiin waxay igu dhaaftay mid ka mid ah 16 gigs !!!
Isku day inaad soo celiso, ama nooca 8.4 ama 8.3, oo wali ay saxiixday Apple, waa inuu ku shaqeeyaa dhibaato la'aan, markaa waxaad markale isku dayi kartaa jeelka qaabka ugu dambeeyay. Guuldarradu maahan oo keliya 128 GB, laakiin sida laga soo xigtay iOS.
Thanks Landa, waxaan kusoo celiyey 8.4 maxaa yeelay 8.3 kamaba saxiixna Apple, waa markii iigu horeysay ee aan ka boodo shaashadda buluuga ah !!
Sidoo kale waad ku mahadsan tahay faahfaahinta.
Isla waxbaa igu dhaca aniga, shaashad buluug ah
Sida loo tirtiro macruufka 9